Yedu Kambani -Shanghai Yangkai Electronics Co, Ltd.
Shanghai Yangkai Electronics Kambani
Shanghai Yangkai Electronics Company ndiye mugadziri uyo nyanzvi pakutsvaga, pamasikiro uye kugadzira mhando dzose kure kuzvidzora. Iyo kambani yakawanikwa mu2014 uye iri muJing An dunhu reShanghai, imwe yenzvimbo dzakasimukira muChina. Isu kwete kwete chete kuita ODM bhizinesi, OEM chinodikanwa zvakare chinogamuchirwa.
Tinogona kupa izere runyorwa rwezvigadzirwa, chepakutanga kure kudzora, kwese kure kure kuzvidzora uye OEM kure control.In ruzivo, zvigadzirwa zvine infrared kure kudzora, bhuruu-zino kure kudzora, Wi-Fi kure kudzora pamwe neiri kure kudzora kwemhepo conditioner. .
Kambani yedu ine anopfuura makumi maviri epamberi ekugadzira mitsara. Mitsetse yese yakashongedzwa nemeno. Zvishandiso zvinosanganisira otomatiki yekuisa muchina, yakazara-otomatiki jekiseni muforoma, wave wave simbi muchina, yakakosha kugadzirwa uye yekuongorora zviridzwa, maviri epamwenje kuyera chiridzwa, yakakwira uye yakadzika tembiricha muchina, X-ray detector, inosarudzika soldering muchina, tembiricha uye humidity detector, infrared kure kudzora muchina wekuyedza, spectrum analyzer, nezvimwewo Yakashongedzwa fekitori inogadzira yakavimbika mhando kure kudzora.
Tine simba rekugadzira kugona uye tinogadzira anopfuura zviuru gumi mamodheru. Independent R & D uye hunotsigirwa utsanzi kutiita kuenda mberi. Mumakore apfuura isu takashandisa akawanda patents anosanganisira patent yekugadzira, patent yekushandisa modhi uye chitarisiko patent. Isu gore rega rega tinotengesa maminioni seti yekure kure kune EU, North America, South America, Australia uye Southeast yeAsia. Zvinoenderana nekusimbiswa kwakasimba kwemhando yepamusoro, hunyanzvi hwetekinoroji, kugadzirisa kushanda zvakanaka, basa rakanakisa, tinovavarira kuve mumwe wevatambi vepamusoro muindasitiri yepasi rese yekudzora indaneti uye nekugadzira kukosha kwakakwira kune vese vatengi vedu.
Pamusoro pekuyera zvatakakwanisa kubudikidza nekutengesa kukosha, isu tinotarisa zvakanyanya kune iro revanhu rezvemagariro pamapfudzi edu. Sevashandi vemunyika, tinoramba tichiita basa redu, tichiedza kuvaka nzanga irinani uye kuchengetedza inoenderana nharaunda nharaunda.
Ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu kana iwe uine chero kubvunza.
Ndatenda zvikuru nekutarisisa kwako uye ndinokushuvira hupenyu hunofadza.